CARROT Cimilada waxay heshaa qaybo cusub iyo qaabab shaqsiyeyn shakhsiyeed | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 10/05/2021 16:00 | Barnaamijyada IPhone, Noticias
La tashiga ah Saadaasha hawada waxay u noqotay bandhig muuqaal ah horumariyayaal badan. Codsiga Cimilada ee loo rakibay sida caadiga ah IOS waxay leedahay macluumaad sax ah oo lagu ogaanayo saadaasha hawada. Si kastaba ha noqotee, adeegsadayaal badan ayaa gaaban oo ay u baahan yihiin Macluumaad dheeri ah oo laxiriira shucaaca cimilada, macquulnimo badan oo dhameystiran ama warbixinno cimilo oo faahfaahsan. Tan awgeed waxaa jira barnaamijyo badan oo laga heli karo App Store sida CARROT Cimilo. Barnaamijkan caanka ah ayaa lagu cusbooneysiiyay qaybaha macluumaadka cusub maxaa la muujiyaa iyo siyaabo cusub oo loo habeeyo aragtida.
Habee aragtiyaha CARROT Cimilada cusboonaysiinta cusub
Soosaarayaasha CARROT Weather had iyo jeer waxaa lagu gartaa inay leeyihiin jargo qosol leh markay tahay cusbooneysiinta noocyada barnaamijyadooda. Xaqiiqdii, annaga isticmaaleyaasha ayaa ah 'kubadaha hilibka' yar, oo wax laga qabto mar kasta oo ay sii daayaan cusbooneysiin cusub. Intaa waxaa dheer, waxay u muuqdaan inay dhigaan noocyada cusub waqtiyada muhiimka ah ee saadaasha hawada aasaasiga ah. Xaaladdan oo kale, way indha-indheeyaan xasaasiyadaha badanaa soo baxa xilligan oo kale sanadka:
Waa xilli xasaasiyad, bacaha hilibka - sanka oo duuf leh, waqti indho cuncun leh, iyo cusbooneysiin weyn oo ku saabsan barnaamijka cimilada aad ugu jeceshahay!
Cusboonaysiinta ayaa ah 5.2 version gundhig u ah awoodda iyo dib-u-habeynta 5.0 ee ay sii daayeen dhowr bilood ka hor iyadoo isbeddel weyn oo gudaha iyo dibaddaba ku dhex jira barnaamijka. Laba waji oo muhiim ah ayaa lagu daray cusbooneysiintan cusub:
Maaraynta: Hab cusub oo loo qaabeeyo aragtiyaha ayaa laga dhex abuuray CARROT Weather si aan wax uga beddelno aragtiyaha oo aan u aragno sida ay u nool yihiin. Marka, waxaan iska ilaalinaa waqti luminta waxaanan awoodnaa inaanu indha indheyno isbeddelada aan sameyneyno. Astaantani waxay u baahan tahay rukumo CARROT Cimilada Cimilada.
Qaybaha cusub ee la muujinayo: Waxyaabo cusub ayaa lagu daray si loogu daro aragtiyada, oo ay ku jiraan radar live, khariidado, qaybta digniinta, iyo waxyaabo kaloo badan. Shaqadani waa lagama maarmaan in la helo rukunka 'Premium Ultra'.
Eve for Homekit waxaa ku jira toobiye si loo hubiyo waqtiga loona joojiyo waraabinta
Suurtagalnimada wax ka beddel cabirka iyo farta qoraalka gudahood arjiga. Dhanka kale, suurtagalnimada la-tashiga xogta hirarka waxaa lagu darayaa rukunka 'Ultra Ultra' iyo, marka lagu daro, ilaa 4 goobo cusub oo qarsoodi ah khariidada, ciyaar ay soosaarayaasha CARROT Cimilada la leeyihiin halyeeyga ugu badan ee dalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » CARROT Cimilada waxay heshaa qaybo cusub iyo qaabab loo qaabeeyo